Ihe Ndị Bụ́ Eziokwu Banyere Nna ahụ, Ọkpara ahụ, na Mmụọ Nsọ - Naanị Ebe A Ka Ndịàmà Jehova Na-edebe Ihe n'Ịntanet
Jọn 1:1 na-ekwu, sị: “Na mbụ ka Okwu ahụ dịrị, Okwu ahụ na Chineke dịkwara, Okwu ahụ bụrụkwa Chineke.” ( Union Version ) Ná mgbada nke isiakwụkwọ ahụ, Jọn onyeozi gosiri n’ụzọ doro anya na “Okwu ahụ” bụ Jizọs. (Jọn 1:14) Otú ọ dị, ebe ọ bụ na a kpọrọ Okwu ahụ Chineke, ụfọdụ ndị na-ekwubi na Ọkpara ahụ na Nna ahụ aghaghị ịbụ akụkụ nke otu Chineke ahụ.
Chetakwa na e deburu akụkụ Bible a n’asụsụ Grik. Ka e mesịrị, ndị nsụgharị sụgharịrị okwu Grik ahụ gaa n’asụsụ ndị ọzọ. Ma ọtụtụ ndị nsụgharị Bible ejighị nkebi ahịrịokwu ahụ bụ́ “Okwu ahụ bụrụkwa Chineke” mee ihe. Ọ̀ bụ n’ihi gịnị? N’ihi ihe ọmụma ha nwere banyere asụsụ Grik nke e ji dee Bible, ndị nsụgharị ahụ kwubiri na e kwesịrị ịsụgharị nkebi ahịrịokwu ahụ bụ́, “Okwu ahụ bụrụkwa Chineke,” n’ụzọ dị iche. Ọ̀ bụ n’ụzọ dị aṅaa? Ndị a bụ ihe atụ ole na ole: “Logos [Okwu] ahụ dị n’ụdị nke chi.” ( A New Translation of the Bible ) “Okwu ahụ bụ chi.” ( The New Testament in an Improved Version ) “Okwu ahụ na Chineke nọrọ, o nwekwara ọdịdị nke Chineke.” ( The Translator’s New Testament ) Dị ka nsụgharị ndị a na-egosi, Okwu ahụ abụghị Chineke n’onwe ya.* Kama nke ahụ, n’ihi ịbụ onye nọ n’ọnọdụ dị elu karịa ihe ndị ọzọ Jehova kere, a kpọrọ Okwu ahụ “chi.” N’ebe a, okwu ahụ bụ́ “chi” pụtara “dike.”
Dị ka ihe atụ, tụlee ihe Jọn dekwuru n’isi nke 1, amaokwu nke 18: “Ọ dịghị onye hụworo Chineke [nke Pụrụ Ime Ihe Nile] n’oge ọ bụla.” Otú ọ dị, ndị mmadụ ahụwo Jizọs, bụ́ Ọkpara ahụ, n’ihi na Jọn kwuru, sị: “Okwu ahụ [Jizọs] wee ghọọ anụ ahụ́, bụ́ mmadụ, o wee biri n’etiti anyị, anyị kirikwara otuto ya.” (Jọn 1:14, Union Version ) Oleezi otú Ọkpara ahụ ga-esi bụrụ akụkụ nke Chineke nke Pụrụ Ime Ihe Nile? Jọn kwukwara na Okwu ahụ “na Chineke nọkwa.” Ma, olee otú mmadụ pụrụ isi soro onye ọzọ nọrọ ma bụrụkwa onye ahụ? (Jọn 1:34) E wezụga nke ahụ, dị ka e dekọrọ na Jọn 17:3, Jizọs gosiri ọdịiche doro anya nke dị n’etiti ya onwe ya na Nna ya nke eluigwe. Ọ kpọrọ Nna ya “nanị ezi Chineke ahụ.” Ná ngwụsị nke Oziọma ya, Jọn chịkọtara ihe nile site n’ikwu, sị: “E detuwo ihe ndị a ka unu wee kwere na Jizọs bụ Kraịst ahụ, Ọkpara Chineke.” (Jọn 20:31) Rịba ama na a kpọrọ Jizọs Ọkpara Chineke, a kpọghị ya Chineke. Ihe ọmụma a e nyekwuru n’Oziọma Jọn na-egosi otú e kwesịrị isi ghọta Jọn 1:1. Jizọs, bụ́ Okwu ahụ, bụ “chi” n’echiche bụ́ na ọ nọ n’ọnọdụ dị elu, ma ọ bụghị otu ọnọdụ ahụ Chineke nke Pụrụ Ime Ihe Nile nọ.
CHỌPỤTA IHE NDỊ BÚ EZIOKWU
Ka ị na-amụ Bible na-aga, ị ga-amatakwu ọtụtụ akụkụ Bible ndị na-akọwa isiokwu a. Ha na-akwado ihe ndị bụ́ eziokwu banyere Nna ahụ, Ọkpara ahụ, na mmụọ nsọ.—Abụ Ọma 90:2; Ọrụ 7:55; Ndị Kọlọsi 1:15.
* Iji nwetakwuo nkọwa banyere ụkpụrụ ndị na-achịkwa ụtọasụsụ Grik, bụ́ ndị a gbasoro na Jọn 1:1, lee peeji nke 26-29 nke broshuọ bụ́ Ì Kwesịrị Ikwere n’Atọ n’Ime Otu?, bụ́ nke Ndịàmà Jehova bipụtara.
Olee otú e kwesịrị isi ghọta Jọn 1:1?